Ahoana ny fomba hanehoana hafatra an-tsoratra? - Easy Multi Display
14. Hafatra an-tsoratra
Ny fampisehoana lahatsoratra maimaim-poana amin'ny haino aman-jery iray na maromaro dia tsy mora velively noho ny amin'ny Easy Multi Display! Azavainay aminao ny fomba fanefana mora foana ny EMD mba hampisehoana ireo hafatrao!
Azonao atao ny mampiseho lahatsoratra maimaimpoana ao amin'ny Easy Multi Display amin'ny fipihana tsotra izao eo amin'ny kisary miendrika lakolosy ao amin'ny baraovan'ny rindrambaiko. Avy eo dia hisokatra ny varavarankely vaovao ho an'ny fikirakirana ny hafatra an-tsoratra.
Fitaovana mora aseho Multi Multi
Ny fikandrana fikandrana
Ny fikirakirana ny hafatra an-tsoratra dia misy fizarana roa izay ho hitantsika miaraka.
Ny hafatrao: eto no hisehoan'ny hafatra efa nofaritana mialoha (noforonina tany aloha kokoa). Eto koa no hanampianao sy hamafana ireo hafatrao. Amin'ity fizarana ity dia hanana ny mety hanovana ny endrik'ireo hafatrao ianao. Ny rindrambaiko dia hamela anao hanova ny làlan'ny hafatra, ny habe, ny lokony, ny endri-tsoratra sns.
Display: Eto no hisafidiananao izay hafatra haseho sy ny efijery misy anao.
Ny fikandrana fandefasana hafatra an-tsoratra
Fomba 6 hampiasana signage dizitaly hanamafisana ny orinasanao
Ny angovo famantarana nomerika dia mitahiry fisokafana sy ny sisa